Maalinta Biyaha Adduunka (22 March): Xuskeeda Maxaan U Qaaddacay! (WQ: Siciid Maxamuud Gahayr) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Maalinta Biyaha Adduunka (22 March): Xuskeeda Maxaan U Qaaddacay! (WQ: Siciid Maxamuud Gahayr)
March 22, 2019 | Filed under: ARRIMAHA BULSHADA,MAQAALLADA | Posted by: Ismail Ahmedyasin
21kii Jenewari 1997kii ayaanu soo degnay Hargeysa, markii aanu bara-kacnay 1988kii. Waayadaas aanu soo laabannay waxa jirikaanka biyaha ah ay qasabaduhu ku dhaamin jiran konton shilinka Somaliland ah, maantana waxa uu marayaa 1500 SL/SH. Qiimihiisu waxa uu kor u kacay soddon jeer.
Maadaama oo laga soo kabanayay dagaallo, maalin walba wax gooni ah ayaa qabsoomi jiray. 26kii Juun 2000 ayaa gurigayaga biyaha lagu xidhay, waxaanay igu lahayd xasuus gaar ah. Waa dharaartii aan ka raystay kaaryoonihii aan jirikaannada ku soo dhaamin jiray. Intii ay jireen xukuumadihii Rayaale iyo Siilaanyo waxa kordhay tiradii dadka Hargeysa, taasina waxa ay suququl gelisay biyihii caasimadda.
Gurigayagu waxa uu hal iyo badh kiiloo mitir dhanka bari ka xigaa faras-magaalaha Hargeysa. Weligay ma raacin gaadiidka dadweynaha (baska) waayo marka aan laamida istaago waxa ii muuqda gawaadhidii u baxayay xaafadda aan deggenahay ee New Hargeysa. Waxa aan deris dhow la ahay Xarunta Dawladda Hoose.
Tan iyo sannadkii 2011ka waxa ay xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo nagu sabi jirtay in sannadka 2016ka la heli doono biyo wada gaadha Hargeysa, waxa uu sannadkaasi noqday kii uu harraadku nagu toban laabmay. Xilliyada qaar waa aanu illawnay biyaha qasabadda, waxaana noo dhaamin jirtay booyad. Waayo ma helno biyo awood leh oo guriga soo geli kara.
Laga bilaabo 2016ka waxa lagama maarmaan noqotay in aanu hogag ka qodno guryaha hortooda si aanu u helno biyo maraya joog dhulka ka hooseeya hal mitir. Godadkaas ayaanu galnaa oo aanu ka dhaansannaa afartii habeenba habeen keliya. Waxa aanu ka seexannaa waaberiga sida aanu jirikaannada iyo foostooyinka biyo ugu shubaynno.
Godadka dhaadheer waxa aanu la galnaa jabcad lagu dhuro disdi ama baaldi, sida aanu weelkaas u qulaaminaynno ayaanu marka dambena foostooyinka hadba wax ku shubnaa. Waa kacaa-fadhiisi, waa kadeed, waa dani ku badday, waana dibindaabyo sii korodhay. Waxa aanu agabka biyo-keydinta soo dhignay meel u dhow irridka dibadda ee guriga, si aanu hadba ula soo gaadhi karo dhawrka galaan ee ay qasabaddu dhiiqo/dhibicdo.
Marka aanu rawaxaynno waxa aanu godka ku daboolnaa ood, si aanay dadka iyo duunyadu ugu dhicin oo aanay dibindaabyo uga dhalannin. Daakiraadda arooryo ayaa laga dareeraa biyo-dhaamintaas bayhoofka iyo balanbalka ah. Aniga waxa iga sii daran kuwa aanay tobanka sanno u soo dhicin biyuhu ee ka xanaaqa magaca wakaaladda biyaha oo ku kala nool daafaha magaalada. Imaka way go’eenba. Booyad ayaa noo hiil ah.
Sidoo kale, degaanka Hargeysa inta ay biyo-gelintu gaadhay waxa ka badan inta aanay biyo-gelintuba gaadhin, ee keliya guryahooda ku dhisay qasabado ay rejaynayaan in mustaqbalka fog ay mar uun biyo helaan. Xaafado dhan oo magaalada ah waxa u taliya labada nin ee darawaliinta u ah labada booyadood ee biyaha u dhaamiya. Haddii ay shaqadooda hakad geliyaanna mooyi si xaalku noqonayo.
Inta mashruuc keliya “Waddada Berbera” la odhanayo waxa maal-gelinaya Dawladaha deriska, DP World ama Imaaraadka Saldhigga Berbera laga siiyay, miyaanay biyaha caasimaddu dib u eegis u baahnayn? Weligay tuush kuma maydhan, waanan necebahay tuushka ay biyuhu xagga sare ka yimaaddaan. In aan gacanna biyaha ku qaado, midna ku qubaysto ayay biyo-la’aantu i bartay.
Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay caddaysay halkii uu ku dambeeyay mashruuca biyo-ballaadhinta Hargeysa, we fashilmay oo ay ku baxeen dhaqaale gaadhay laba iyo lixdan milyan oo doollar. Mooyi wax ka rumoobi dhuumaha hadda magaalada la dhigo.
Rakibaaddii biyaha Hargeysa ee 1992kii waxa ku kacay laba milyan iyo badh, waana ka illaa hadda lagu sii dhutinayo. Indhuhu waxa ay dhawri jireen togag la dhawrayay inay ka soo burqadaan Xumba-weyne iyo Jaleelo oo gudbay.
Hal-abuur ka hadlaya mashruucii biyaha Hargeysa ayaa waxa uu yidhi:
Mayay aan da’ayn bay bulshadu, maandhe tebayeene
Magaaladu harraadkay qabtaan, cidi malayseene
Waa inaan mashruucii biyaha, caawa lay miyine
Inaad maaxda soo saartid buu, maanku naawiliye
Maalgelinti raacdee rejada, mawdku yuu diline
Qoraalkan oo aan horraantii 2017ka faafiyay, waxa aan ku celiyay mar labaad horraantii 2018ka intaanu fashilmin Xumboweyne. Berri waa maalinta caalamiga ah ee biyaha. Waan qaaddacay xuskeeda. Ilaahay booyadaha ha barakeeyo.